Teny soa sakafo Alarobia 2A Paka (Jo. 3, 16-21) 22/04/2020 | FKMP
Alarobia 2A Paka (Jo. 3, 16-21) 22/04/2020
“Toy izao no nitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy tsaraina; fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny Anaran’ny Zanak’Andriamanitra tokana. Ary izao no fitsarana: tonga amin’izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon’ny olona ny haizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miharihary ny asany; fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana, mba hiharihary ny asany, fa atao amin’Andriamanitra.”
Andriamanitra tia antsika, noho izany dia nomeny antsika ny zanany lahitokana. Ny tanjona dia ny hananantsika ny fiainana mandrakizay. Kanefa mitaky ezaka amintsika tsirairay izany : ny finoana, ny fiaianana ny fahamarinana. Ny zavatra misy anefa amin’izao fotoana dia tsy te hiaina io fahamarinana io izay fahazavana isika fa aleontsika miaina ao anatin’ny haizina mba tsy ho hita miharihary ny fahalementsika.
Ny Fiangonana dia natao hampanjaka sy hampiseho izay fahamarinana izay ary hitory ny fahazavana.
Raha ho ahy manokana amin’ny maha Relijiozy ahy dia tokony ho jiro manazava ireo mpiara-belona, mpifanerasera, ary ireo manodidina ahy. Ny fiainako ny voady izay nataoko dia taram-pahazavana ho an’ny hafa. Ary mbola io taram-pahazavana avy amin’i Jesoa io izay miseho amin’ny alalan’ny antso hanompo ny hafa no mbola hivelomako sy hizarako an-kafaliana amin’ny hafa ka mbola maha toy izao ahy.
Izany indrindra no isaorako an’Andriamanitra androany amin’ny lalam-piainana niantsoany ahy satria androany dia mankalaza ny faha 8 taona ny nanaovako ny voady mandrakizay aho (22/04/2012-22/04/2020).
« Inty aho ry Jesoa ô, hanara-dia anao ; ampio isan’andro mba ho lavorary.
Manolon-tena aho, ho anao mandrakizay, ho sanatriaviko ny hivadika ».
Previous Post: Talata 2A Paka (Jn 3,7b-15) 21/04/20
Next Post: Alakamisy 2A Paka (Jo 3, 31-36) 23/04/2020